Dadka qaar oo qaadashada dhalashada ku qasban in ay sugaan 25 sanno - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Scanpix. Foto: Montage: Sveriges Radio.
Dadka qaar oo qaadashada dhalashada ku qasban in ay sugaan 25 sanno
"Wax mico ah kuma fadhido xataa hadii uusan qofka ka qayb qaadan xad-gudubyada"
La daabacay onsdag 26 juni 2013 kl 14.47
Ruuxii kamid ahaan jirey urur ama hay'add dowladd oo aan demokrati aheyn dalkiisii hore waxuu ku qasbanyahey in uu sugo 25 sanno qaadashada dhalashada Iswedhen. Sidaas waxey la soo gudboonaatey in la yiraahdo Ali oo ahaan jirey maamule la shaqeyn jirey xukumadii kaligii taliska aheyd ee Irak ee uu hogaamin jirey Saddam Xussien. Ali ayaa dalabkiisa qaadashada dhalashada laga siiyey maya
- Wax mico ah kuma fadhido xataa hadii uusan qofka ka qayb qaadan xad-gudubyada ka dhanka ah bina'aadamka, ayuu yeri Bo Lundgren oo ka ah migrationsverket xeel-dheere arimaha dhalashada.
- Ruuxa dhalashada dalbanaya hadii uu kamid ahaan jirey howlaha urur la ogayahay in uu geysan jirey xadgububyo abaabulan, sida jir-dil qud ka-goyn aan sharci aheyn qofka nocaas ah mahan in la siiyo dhalashada, waa in uu sugaa waqti dheer ay ka soo wareego xilligii uu howlahan iskaga baxey, ayuu raaciyey.
Qofka rabaa in uu qaato dhalashada Iswedhen waa in uu buuxiyaa sharuuda ah " in nolashiisa horey aheyd mid ay ku dheehnayd sharaf ku noolaasho" oo micnaheedo yahay hadii uu qofka kamid ahaan jirey koox ama urur iyo xukumad aan ku dhisneyh hanaan demokrati in ay tahay in uu sugo qaadashada dhalashada dalkaa kadib marka ay ka soo wareegto 25 sanno kadib markii uu howlahaas iskaga baxey. Taas oo ay dowladda Iswedhen go'aaminsey sannadkii 204.
- Waxaan waddanka ku sugnahey mudo lix sanno ah. Waxeyna igu yiraahdeen ma noqon kartid muwaadin Iswedhish ah, waa in aad sugtaa ugu yaraan 25 sanno.
Ruuxa sidaan yeri waa ruux ay saameysey arintaan kaaso o loo diidey qaadashada dhalashada Iswedhen. Waxuu rabaa in aan magaciisa dhabta ah la sheegin sidaas-darteed ayaan ugu wacney Ali. Ali waxuu ka yimid dalka Irak. Halkaas waxuu shaqaalo ka ahaan jirey hayadd dowli ah, howlshiisana waxey ahaan jirtey arimo quseeya maareynta iyo maamulka, gaar ahaan dhanka diwaan gelinta. Laakiin xilligii uu hayaddan u shageyn jirey ayaa aheyd xilligi uu dalkaas xukumi jirey keligii talayii Saddam Xusseen, xukunkaas oo u geysan jirey xad-gubyo aad u daran shacabka. Laakiin dhibaatada ragimka ku kici jirey ayuunan Ali wax kaalin ah ku laheyn, balse saas oo ay tahay waa in uu sugo 25 inta uu ka qaadanayo dhalashada dalkan Iswedhen
- Maxaa sameeyaa? Wax aansameeyo garanmaayo, ayuu yeri Ali.
Qaabka loogu tiriyo ururada midkooda aan aheyn demokrati ah ayaa ah kuwo kalo gedisan. Marka ay hay'adda Migrationsverket go'aanka gaareysana waxey fiiriyaan hayadda uu qofka ka howl-geli jirey sida hayaddaha amniga iyo ciidanka mliliteriga balse sidoo kale waxaa dhici karta in la fiiryo xataa sida arinta Ali ee ah in uu ruuxa ka howl-gala hay'add ama ururka howlshiisa tahay keliya maamul iyo maareyn oo aan awoodin in uu wax ka qabto xad-gudubyada regimka geysanayo. Bo Lungren iyo markale. [
- Waxaan sameynaa tijaabo anaga oo ka duuleyna go'aanka xukumada ee quseeya arintaan.Qasab ma ahan in uu qof laf ahaantiisa ka qayb qaatey xad-gubyada waxaa keliya ee ku filan in uu ka howl-geli jirey hay'add aan demokrati aheyn, ayuu yeri Bo Lundgren oo ah xeel-dheere dhanka qaadashada dhalashada kana howl-gala hay'adda socdaalka ee Migrationsverket.